अस्ट्रेलियाको स्टक मार्केटमा शेयर किनबेच गर्न विद्यार्थीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
हामी विद्यार्थीको रुपमा बसेकाहरुले अस्ट्रेलियाको स्टक मार्केटमा शेयर किनबेच गर्न पाइन्छ कि पाइन्न होला ?
पाइन्छ । जुनसुकै भिषामा बसेको भए पनि अस्ट्रेलियामा शेयर किनबेच गर्न पाइन्छ । शेयर किनबेचबाट हुने नाफा वा घाटालाई आफ्नाे ट्याक्स रिटर्नमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ र नियम अनुसारको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाईं अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई अस्ट्रेलियाको रेसिडेन्टको सरह ट्याक्सका नियमहरु लाग्दछ र ओभरसिजमा बस्नुहुन्छ भने अलि फरक किसिमको नियम लाग्ने हुन्छ ।
चाहे जे होस्, शेयर मार्केट आफैमा एउटा जोखिमपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो र तपाईं हामी जस्ता खुद्रा लगानीकर्ताहरुले पैसा कमाउने भन्दा गुमाउने चान्स धेरै हुन्छ । त्यसैले यस्ता लगानी गर्नुपूर्व पूर्णरुपमा सचेत भएर र व्यावसायिक सल्लाह लिएर मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।